တချိန်ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပြန်လွမ်းနေတဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ် - Myanmarload
တချိန်ကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ပြန်လွမ်းနေတဲ့ ကျော်ကျော်ဗိုလ်
လွန်ခဲ့သော ၈ လ က 21:42 May 15, 2018
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အနုပညာနဲ့ ဇာတ်သဘင်လောကအထိမသိသူရှား နာမည်ကြီးမင်းသားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ကျော်ကျော်ဗိုလ်ကို အားလုံးကြိုက်မယ်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိအနုပညာဇာတ်ကားများစွာနဲ့အတူ နှင်းဆီအကြိမ့်အဖွဲ့ကိုပါ ဦးဆောင်နေတဲ့ သူတစ်ဦးဆိုလည်းမှားမယ်မထင်ပါဘူး။ လက်တလောပရိသတ်တွေနဲ့ဝေးကွာနေပေမယ့် တနေ့တာလှုပ်ရှားမှုတွေကို ဓာတ်ပုံများနှင့်တကွ အမြဲမပျက်ပြောပြလေ့ရှိသူတစ်ယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့ သရုပ်ဆောင်ကျော်ကျော်ဗိုလ်ရဲ့ဖေ့စ်ဘွက်စာမျက်နှာပေါ်တွင် အရင်ကအမှတ်တရတွေထဲကအချို့ကို သတိတရဖြစ်နေကြောင်း သိရပါတယ်။ အဆိုပါ အမှတ်တရတွေက "ဆံပင်အရှည်၊ နှုတ်ခမ်းမွေးလေးနဲ့6packsခန္ဓာကိုယ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကျော်ကျော်ဗိုလ်ရဲ့စာသားလေးက
ဆံပင်ရှည်ရယ် ... နှုတ်ခမ်းမွှေးရယ် ...6packs ရယ်
အင်း .... ??? ရယ် ...
Enough ... တော်ပြီ ... မနိင်တော့လို့ " ဟူ၍ ရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
ဟိုအရင်က ခက်မိုက်မိုက်စတိုင်လေးနဲ့အတူ ဆွဲမတ်ဖွယ်ရာ ခန္ဓာကိုယ် ကိုပြန်လည်လွမ်းဆွေ့တမ်းတနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ချစ်ပရိသတ်ကြီးအတွက် သရုပ်ဆောင် ကျော်ကျော်ဗိုလ်ရဲ့ ဟိုအရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
Photos - Kyaw Kyaw Bo